Airtel Madagascar: tsy natokana ho an’ny lehilahy ihany ny teknolojia | NewsMada
Airtel Madagascar: tsy natokana ho an’ny lehilahy ihany ny teknolojia
Resen-dahatra sy sarihana hahomby any amin’ny fifehezana ny teknolojia vaovao ankehitriny ny ankizivavy. Io ny tanjona napetraky ny Airtel tamin’ny fankalazana ny andro eran-tany ho an’ny vehivavy, miavaka amin’ny fahita mahazatra isan-taona. Ankizivavy mpianatra kilasy faha-3 ao amin’ny CEG Antanimena nentina nitsidika ny « Technical Data Center » an’ny Airtel Madagascar, ny 11 marsa teo, nampahafantarana azy ireo ny fomba fampihodinana ny tambajotra finday. Vehivavy rahateo ny mpiandraikitra izany teknika izany, Rtoa Annelyse Bikiny, manaporofo fa voafehin’ny vehivavy ny fivoaran’ny teknolojia fa tsy natao ho an’ny lehilahy ihany.
« Hisainana mitovy, hajoro am-pahamendrehana, havaozina ho an’ny fampandrosoana ». Io ny teny filamatra ho an’ny andron’ny vehivavy tamin’ity taona ity, mifanojo indrindra amin’ny foto-kevitry ny Airtel miaro ny zon’ny vehivavy hatramin’izay sy nanehoan’izy ireo fa manana ny lanjany tokoa ny vehivavy ho an’ny fampandrosoana ny firenena.
“Tianay hesorina tanteraka ao an-tsaina izany hoe natokana ho an’ny lehilahy ihany ny teknika. Homena fahafahana mitovy ny anay ho an’ny rehetra, porofon’izany, io vehivavy tanora io, maneho ny fahaizany mitazona ny fikirakirana ny lafiny teknika. Laharam-pahamehana ho anay ny mampiditra tanora vavy eo amin’ny sehatry ny fanavaozana ny teknolojia”, hoy ny tale jeneralin’ny Airtel, i Maixent Bekangba.
Naseho tamin’izany fa manana anjara toerana lehibe ny vehivavy amin’ireo sehatra vaovao iankinan’ny fampandrosoana. Notolorana fankasitrahana ireo ankizy mpianatra tamin’ny fiafaran’ny fitsidihana sy niaraka sary tamin’ilay mpanakanto, Shyn.